၂၀၁၉ AFC အာရှဖလား ခြေစစ်ပွဲ - ဝီကီပီးဒီးယား
၂၀၁၉ AFC အာရှဖလား ခြေစစ်ပွဲ
45 (အဖွဲ့ချုပ် 1 ခုမှ)
၆၄၈ (တစ်ပွဲလျှင် ၃.၁၉ ဂိုးနှုန်း)
၂၆၇၁၀၄၇ (တစ်ပွဲလျှင် ၁၃၁၅၈ ဦးနှုန်း)
All statistics correct as of ၁၃ ဇွန် ၂၀၁၇
၂၀၁၉ AFC အာရှဖလားခြေစစ်ပွဲ သည် အာရှဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်(AFC) မှ စီစဉ်သော ၂၀၁၉ AFC အာရှဖလား ပြိုင်ပွဲဝင် အသင်းများကို ရွေးချယ်ခြေစစ်ပွဲများ ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၄ခုနှစ်မှ စတင်ကာ အာရှဖလားပွဲစဉ်များတွင် အသင်း၁၆သင်း ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြသော်လည်း ၂၀၁၉ အာရှဖလားတွင် ပထမဆုံး အကြိမ်အဖြစ် ၂၄ သင်းပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။ 
ခြေစစ်ပွဲစဉ်များသည် အဆင့်လေးဆင့်ရှိပြီး ပထမနှစ်ဆင့်မှာ ၂၀၁၈ ဖီဖာ ကမ္ဘာ့ဖလား အတွက် ခြေစစ်ပွဲစဉ်နှစ်ဆင့်လည်း ဖြစ်သည်။
၁ ခြေစစ်ပွဲ ကျင်းပမှု ပုံစံ
၄ ပထမ အဆင့်
၅ ဒုတိယ အဆင့်
၅.၁.၁ အုပ်စု က
၅.၁.၂ အုပ်စု ခ
၅.၁.၃ အုပ်စု ဂ
၅.၁.၄ အုပ်စု ဃ
၅.၁.၅ အုပ်စု င
၅.၁.၆ အုပ်စု စ
၅.၁.၇ အုပ်စု ဆ
၅.၁.၈ အုပ်စု ဇ
၅.၂ ဒုတိယ အကောင်းဆုံးအသင်းများ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်
၅.၃ နံပါတ် ၄ နေရာရှိ အသင်းများအတွက် အဆင့်သတ်မှတ်ချက်
၆ ရှုံးထွက် ပွဲစဉ်များ
၆.၁ ပွဲစဉ် ၁
၆.၂ ပွဲစဉ် ၂
၇ တတိယ အဆင့်
၈ ခြေစစ်ပွဲအောင် အသင်းများ
ခြေစစ်ပွဲ ကျင်းပမှု ပုံစံ[ပြင်ဆင်ရန်]
ကမ္ဘာ့ဖလား အကြိုခြေစမ်းပွဲများနှင့် အာရှဖလားခြေစမ်းပွဲများကို ပူးပေါင်းရန်အဆိုကို AFC ပြိုင်ပွဲကျင်းပရေး ကော်မတီမှ အသိအမှတ်ပြု လက်ခံခဲ့သည်။
ပထမ အဆင့်။ ။ (အာရှ) အဆင့်သတ်မှတ်ချက် ၃၅ မှ ၄၆ အထိရှိသော အသင်း ၁၂သင်းသည် အိမ်ကွင်း အဝေးက္ငင်း နှစ်ကျော့ ယှဉ်ပြိုင်ကစားရပြီး အနိုင်ရရှိသော ၆သင်းသည် ဒုတိယ အဆင့်သို့ တက်ရောက်ခွင့်ရသည်။
ဒုတိယ အဆင့်။ ။ (အာရှ အဆင့်သတ်မှတ်ချက် ၁ မှ ၃၄ အဆင့်ရှိသော ၃၄ သင်းနှင့် ပထမ အဆင့် အောင်လာသော ၆ သင်း) အသင်း ၄၀ အား အုပ်စု ၈ စုခွဲ၍ အိမ်ကွင်း အဝေးကွင်း အုပ်စုပတ်လည် ကစားရသော အဆင့် ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ အုပ်စု ၈ စုမှ ထိပ်ဆုံး ရှစ်သင်း၊ ဒုတိယ အကောင်းဆုံး ၄သင်းသည် ဖီဖာ ကမ္ဘာ့ဖလား ခြေစစ်ပွဲ တတိယအဆင့် သို့ရောက်ရှိပြီး အာရှဖလား ခြေစစ်ပွဲ အောင်သည်။
ကျန်အသင်းများထဲမှ ထိပ်ဆုံး ၁၆ သင်း (ကျန်ရှိသော ဒုတိယ အကောင်းဆုံး ၄ သင်း၊ အုပ်စု တခုစီ၌ တတိယ ရရှိသော ၈ သင်း၊ အုပ်စု တခုစီ၌ စတုတ္ထ ရရှိသော အသင်းများထဲမှ အကောင်းဆုံး ၄ သင်း)သည် တတိယ အဆင့်သို့ တိုက်ရိုက်တက်ရောက်ခွင့် ရရှိသည်။
ကျန်ရှိသော ၁၂သင်းမှာ ရှုံးထွက် အဆင့်ကို ယှဉ်ပြိုင်ပြီးမှ တတိယ အဆင့်ကို တက်ရောက်ခွင့် ရရှိကြသည်။
ရှုံးထွက် အဆင့်။ ။ ပြိုင်ပွဲကျင်းပရေး ကော်မတီ၏ ၂၀၁၄ နိုဝင်ဘာတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော အစည်းအဝေးတွင် ရှုံးထွက်ပွဲစဉ်များကို ထည့်သွင်းကျင်းပရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။  ရှုံးထွက်ပွဲစဉ်များကို အိမ်ကွင်း အဝေးကွင်း နှစ်ကျော့ ကစားပြီး ရှစ်သင်းမှာ တတိယ အဆင့်သို့ တက်ရောက်ခွင့် ရရှိသည်။
တတိယ အဆင့်။ ။ အသင်းပေါင်း ၂၄ သင်းသည် အိမ်ကွင်း အဝေးကွင်း အုပ်စုပတ်လည် ယှဉ်ပြိုင်ကစားကြပြီး အနိုင်ရရှိသော အသင်းများ ခြေစစ်ပွဲအောင်သည်။ ရှုံးထွက်အဆင့်သည် မူလ ကြေညာထားသော ခြေစစ်ပွဲစဉ်၏ အပြောင်းအလဲ တခုဖြစ်ပြီး အဆင့်၄ နေရာနှင့် ၅ နေရာမှ အသင်းများကို တတိယ အဆင့်သို့ ရောက်ရှိစေခဲ့သည်။
ဖီဖာ အသိအမှတ်ပြု အာရှ ၄၆ နိုင်ငံသည် ခြေစစ်ပွဲကို ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြသည်။ နိုင်ငံအလိုက် အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ အတွက် ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၅ တွင် ထုတ်ပြန်သော ဖီဖာ၏ ကမ္ဘာ့အဆင့် သတ်မှတ်ချက်များကို အသုံး ပြုသည်။ 
တရုတ် တိုင်ပေ (182)
ကမ္ဘာ့ဖလား ခြေစစ်ပွဲနှင့် AFC အာရှဖလား ခြေစစ်ပွဲကို ပူးပေါင်း ခြင်းကြောင့် ၂၀၁၉ အာရှဖလား အိမ်ရှင် နိုင်ငံUAE သည် အာရှဖလားအတွက် ခြေစစ်ပွဲ အောင်ပြီးဖြစ်သော်ငြား ခြေစစ်ပွဲဒုတိယ အဆင့်သို့ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ရသည်။
ပထမ အဆင့် First leg ၁၂ မတ် ၂၀၁၅
Second leg ၁၇ မတ် ၂၀၁၅
ဒုတိယ အဆင့် Matchday 1 ၁၁ ဇွန် ၂၀၁၅
Matchday2၁၆ ဇွန် ၂၀၁၅
Matchday3၃ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၅
Matchday4၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၅
Matchday5၈ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၅
Matchday6၁၃ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၅
Matchday7၁၂ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၅
Matchday 8 ၁၇ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၅
Matchday9၂၄ မတ် ၂၀၁၆
Matchday 10 ၂၉ မတ် ၂၀၁၆
ရှုံးထွက် ပွဲစဉ်များ Round 1 First leg ၂ ဇွန် ၂၀၁၆
Round 1 Second leg ၇ ဇွန် ၂၀၁၆
Round2First leg ၆ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၆
Round2Second leg ၁၁ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၆
တတိယ အဆင့် Matchday 1 ၂၈ မတ် ၂၀၁၇
Matchday2၁၃ ဇွန် ၂၀၁၇
Matchday3၅ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၇
Matchday4၁၀ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၇
Matchday5၁၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၇
Matchday6၂၇ မတ် ၂၀၁၈
ပထမအဆင့် အတွက် ပွဲစဉ်များကို ၁၀ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၀၁၅ တွင် မလေးရှားနိုင်ငံ ကွာလာလမ်ပူမြို့ AFC House၌ မဲနှိုက် ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ 
ဤအဆင့်တွင် ရှုံးနိမ့်ခဲ့သော ၆ သင်းသည် 2016 AFC Solidarity Cupတွင် ယှဉ်ပြိုင်ရသည်။
ဒုတိယ အဆင့် အတွက် ပွဲစဉ်များကို ၁၄ ဧပြီ ၂၀၁၅ တွင် မလေးရှားနိုင်ငံ ကွာလာလမ်ပူမြို့ JW Marriott ဟိုတယ်တွင် မဲနှိုက် ရွေးချယ်ခဲ့သည်။
ဆော်ဒီအာရေဗျ 8620284+24 20 Third round and Asian Cup — 2–1 3–2 2–0 7–0
အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု 852 1 254+21 17 1–1 — 2–0 10–0 8–0
ပါလက်စတိုင်း 8332226+16 12 Asian Cup qualifying third round 0–0 0–0 — 6–0 7–0
မလေးရှား 8 1 163 30 −274Asian Cup qualifying play-off round 0–3[မှတ်စု ၁] 1–2 0–6 — 1–1
အရှေ့တီမော 80262 36 −3420–10 0–1 1–1 0–1 —
ဩစတြေးလျ 870 1 294+25 21 Third round and Asian Cup — 5–1 3–0 7–0 5–0
ဂျော်ဒန် 8512217+14 16 Asian Cup qualifying third round 2–0 — 0–0 3–0 8–0
ကာဂျစ္စတန် 842210 8 +2 14 1–2 1–0 — 2–2 2–0
တာဂျစ်ကစ္စတန် 8 125920 −115Asian Cup qualifying play-off round 0–3 1–3 0–1 — 5–0
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် 80172 32 −30 1 0–4 0–4 1–3 1–1 —
ကာတာ 870 1 294+25 21 Third round and Asian Cup — 1–0 2–0 4–0 15–0
ဟောင်ကောင် 8422135+8 14 Asian Cup qualifying third round 2–3 0–0 — 2–0 7–0
မော်လဒိုက် 82068 20 −126Asian Cup qualifying play-off round 0–1 0–3 0–1 — 4–2
ဘူတန် 800 8552 −4700–3 0–6 0–1 3–4 —
အီရန် 8620263+23 20 Third round and Asian Cup — 2–0 3–1 6–0 4–0
အိုမန် 8422117+4 14 Asian Cup qualifying third round 1–1 — 3–1 1–0 3–0
တာ့ခ်မင်နစ္စတန် 841310 11 −1 13 1–1 2–1 — 1–0 2–1
ဂူအမ် 82153 16 −1370–6 0–0 1–0 — 2–1
အိန္ဒိယ 8 107518 −133Asian Cup qualifying play-off round 0–3[မှတ်စု ၁] 1–2 1–2 1–0 —
ဂျပန် 8710270+27 22 Third round and Asian Cup — 5–0 0–0 5–0 3–0
ဆီးရီးယား 860226 11 +15 18 0–3 — 1–0 5–2 6–0
စင်ကာပူ 8314990 10 Asian Cup qualifying third round 0–3 1–2 — 1–0 2–1
အာဖဂန်နစ္စတန် 83058 24 −1690–6 0–6 2–1 — 3–0
ကမ္ဘောဒီးယား 800 8 1 27 −260Asian Cup qualifying play-off round 0–2 0–6 0–4 0–1 —
ထိုင်း6420 146+8 14 Third round and Asian Cup — 2–2 1–0 4–2 —
အီရတ်6330 136+7 12 2–2 — 1–0 5–1 —
ဗီယက်နမ်62 137 8 −17Asian Cup qualifying third round 0–3 1–1 — 4–1 —
တရုတ် တိုင်ပေ6006519 −140Asian Cup qualifying play-off round 0–2 0–2 1–2 — —
အင်ဒိုနီးရှား (D)00000000 Disqualified due to FIFA suspension[မှတ်စု ၁] — — — — —
တောင်ကိုရီးယား 8 800 270+27 24 Third round and Asian Cup — 1–0 3–0[မှတ်စု ၁] 4–0 8–0
လက်ဘနွန် 8323126+6 11 Asian Cup qualifying third round 0–3 — 0–1 1–1 7–0
ကူဝိတ်[မှတ်စု ၁] 831412 10 +2 10 0–1 0–0 — 9–0 0–3[မှတ်စု ၁]
မြန်မာ 82249 21 −12 8 0–2 0–2 3–0[မှတ်စု ၁] — 3–1
လာအို 8 1 166 29 −234Asian Cup qualifying play-off round 0–5 0–2 0–2 2–2 —
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ On 16 October 2015, the Kuwait FA was suspended by FIFA with immediate effect, after Kuwait had failed to comply withadecision from the FIFA Executive Committee that sports law of the country had to be changed before 15 October. The three remaining matches involving Kuwait (away v Myanmar, home v Laos, away v South Korea) were not played as originally scheduled, and were later awarded as 3–0 wins for Kuwait's opponents.
ဥဇဘက်ကစ္စတန် 870 1 207+13 21 Third round and Asian Cup — 3–1 1–0 1–0 1–0
မြောက်ကိုရီးယား 851214 8 +6 16 Asian Cup qualifying third round 4–2 — 0–0 2–0 1–0
ဖိလစ်ပိုင် 83148 12 −4 10 1–5 3–2 — 2–1 0–1
ဘာရိန်း 830510 1009 0–4 0–1 2–0 — 3–0
ယီမင် 8 107217 −153Asian Cup qualifying play-off round 1–3 0–3[မှတ်စု ၁] 0–2 0–4 —
ဒုတိယ အကောင်းဆုံးအသင်းများ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်[ပြင်ဆင်ရန်]
အောက်ပါ အချက်အလက်များကို ကြည့်ပြီး ဒုတိယအကောင်းဆုံး အသင်းများကို သတ်မှတ်သည်။
ရမှတ်(နိုင်ပွဲအတွက် ၃ မှတ်၊ သရေပွဲအတွက် ၁ မှတ်၊ ရှုံးပွဲအတွက် ၀ မှတ်)
လိုအပ်လျှင် ဖီဖာ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ကြားနိုင်ငံ တခုခုတွင် ကစားခြင်း
အုပ်စုတခုတွင် အသင်း ၅ သင်းရှိသော်လည်း ဖီဖာ၏ ပြစ်ဒဏ်ကြောင့် အင်ဒိုနီးရှား မပါတော့သဖြင့် အုပ်စု စ မှာ အသင်းလေးသင်းသာရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ဒုတိယ အကောင်းဆုံး အသင်းများကို ဆုံးဖြတ်သောအခါ အဆင့် ၅ နေရာရှိအသင်းများနှင့် ရလဒ်ကို ထည့်သွင်း စဉ်းစားခြင်းမပြုပါ။ 
နံပါတ် ၄ နေရာရှိ အသင်းများအတွက် အဆင့်သတ်မှတ်ချက်[ပြင်ဆင်ရန်]
အောက်ပါ အချက်အလက်များနှင့်ကို ကြည့်ပြီး နံပါတ် ၄ နေရာရှိ အသင်းများအား အဆင့်သတ်မှတ်သည်။
AFC ပြိုင်ပွဲကျင်းပရေး ကော်မတီ၏ ၂၀၁၄ နိုဝင်ဘာတွင် ကျင်းပခဲ့သော အစည်းအဝေးအရ တတိယဆင့် ပြိုင်ပွဲများ အတွက် ၈ သင်းရွေးချယ်ရန် ရှုံးထွက်ပွဲစဉ်များကို ကျင်းပရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤအဆင့်မှ ရှစ်သင်းသည် တတိယဆင့်သို့ တက်ရောက်ခွင့် ရကြသည်။ နောက်တဆင့်သို့ တက်ခွင့်မရသော ၃ သင်းသည် 2016 AFC Solidarity Cup တွင် သွားရောက် ယှဉ်ပြိုင်ရသည်။
ရှုံးထွက် ပွဲစဉ်များကို ၇ ဧပြီ ၂၀၁၆ တွင် မလေးရှားနိုင်ငံ ကွာလာလမ်ပူမြို့ AFC House၌ မဲနှိုက် ရွေးချယ်ခဲ့သည်။
အောက်ဆုံး အသင်း ဘူတန် သည် နှုတ်ဆက်ထွက်ရမည်ဖြစ်သည်။ ကျန်ဆယ်သင်းကို နှစ်သင်းစီ ၅တွဲ တွဲကာ အိမ်ကွင်း အဝေးကွင်း နှစ်ကျော့ကစားရကာ အနိုင်ရရှိသောအသင်းသည် တတိယအဆင့်သို့ ရောက်ရှိမည် ဖြစ်သည်။
ပွဲစဉ်၁ မှ ရှုံးသော ၅ သင်း နှင့် ဘူတန် တို့သည် ပွဲစဉ် ၂ တွင် ပါဝင်သည်။ အသင်း ၆ သင်းကို ၃တွဲ တွဲကာ အိမ်ကွင်း အဝေးကွင်း ကစားစေပြီး အနိုင်ရသော ၃သင်းသည် တတိယဆင့်သို့ တက်ခွင့်ရသည်။
ဤအဆင့်တွင် အသင်းပေါင်း ၂၄သင်း ပါဝင်ကစားမည် ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၉ အိမ်ရှင်ဖြစ်သော အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု အသင်းသည် ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလား ခြေစစ်ပွဲ တတိယ အဆင့်သို့ ရောက်ရှိနေပြီ ဖြစ်သောကြောင့် အိမ်ရှင် အတွက် အလိုအလျောက် အောင်မြင်ခွင့်သည် မလိုအပ်တော့ပေ။ ဤအဆင့်မှ အသင်း ၁၂ သင်း ခြေစစ်ပွဲ အောင်မြင်ခွင့် ရရှိမည် ဖြစ်သည်။
ဂူအမ်၏နုတ်ထွက်မှုနှင့် ကူဝိတ်၏ ပြစ်ဒဏ်တို့ကြောင့် AFC သည် အသင်း ၂၄ သင်း ပြည့်စေရန် နီပေါနှင့် မကာအို ( 2016 AFC Solidarity Cup မှ ထိပ်ဆုံး နှစ်သင်း) တို့ကို ဖိတ်ခေါ်ယှဉ်ပြိုင်စေခဲ့သည်။
တတိယ အဆင့် အတွက် ပွဲစဉ်များကို ၂၃ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၇ တွင် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု အဘူဒါဘီတွင် မဲနှိုက် ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ အသင်း ၂၄ သင်းအား အုပ်စု ၆ခု၊ တအုပ်စုလျှင် ၄သင်း စီဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ 
အသင်းများအား ရမှတ်အလိုက် အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ (နိုင် ၃ မှတ်၊ သရေ ၁ မှတ်၊ ရှုံး ၀ မှတ်) အကယ်၍ ရမှတ်များ တူနေပါက အောက်ပါ စည်းမျဉ်းများ အတိုင်း ဆုံးဖြတ်သည်။
ရမှတ်တူနေသော အသင်းအချင်းချင်း ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံချိန်၌ ရမှတ်
ရမှတ်တူနေသော အသင်းများ၏ ဂိုးကွာခြားချက်
ရမှတ်တူနေသော အသင်းများ၏ ရဂိုးအရေအတွက်
ရဂိုးများတူလျှင် ရမှတ်တူနေသော အသင်းအချင်းချင်း ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံချိန်၌ ရသော အဝေးဂိုး
နှစ်သင်းထက်ပိုသော ရမှတ်တူ အသင်းများကို အထက်ပါ အချက်များနှင့် စိစစ်ပြီးနောက် ရမှတ်တူ အသင်းမှာ နှစ်သင်းထက်ပိုနေသေးလျှင် အချက် ၁-၄ ကိုဖြင့် တခေါက် ထပ်မံ၍
အုပ်စု ပတ်လည်ပွဲများတွင် ဂိုးကွာခြားချက်များ
အုပ်စု ပတ်လည်ပွဲများတွင် ရဂိုးများ
နောက်ဆုံးအဆင့်၌ အသင်း ၂ သင်း ရမှတ် တူနေလျှင် ပယ်နတီ အဆုံးအဖြတ်ရယူခြင်း
စည်းကမ်းလိုက်နာမှု အတွက် အမှတ် (အဝါကဒ် ၁ မှတ်၊ ၂ဝါ ၁နီ ၃ မှတ်၊ တိုက်ရိုက် အနီကဒ် ၃မှတ်၊ အဝါကဒ် နှင့် တိုက်ရိုက် အနီကဒ် ၄မှတ်)
မဲနှိုက် ၍ အဆုံးအဖြတ် ရယူခြင်း
Country can qualify
Previous appearances in tournament၁
အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု *Hosts !အိမ်ရှင် 01 !၉ မတ် ၂၀၁၅ 09 !၉ (၁၉၈၀၊ ၁၉၈၄၊ ၁၉၈၈၊ ၁၉၉၂၊ ၁၉၉၆၊ ၂၀၀၄၊ ၂၀၀၇၊ ၂၀၁၁၊ ၂၀၁၅)
ကာတာ 02 !Second Round Group C winners 02 !၁၇ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၅ 09 !၉ (၁၉၈၀၊ ၁၉၈၄၊ ၁၉၈၈၊ ၁၉၉၂၊ ၂၀၀၀၊ ၂၀၀၄၊ ၂၀၀၇၊ ၂၀၁၁၊ ၂၀၁၅)
တောင်ကိုရီးယား 03 !Second Round Group G winners 03 !၁၃ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၆ 13 !၁၃ (၁၉၅၆၊ ၁၉၆၀၊ ၁၉၆၄၊ ၁၉၇၂၊ ၁၉၈၀၊ ၁၉၈၄၊ ၁၉၈၈၊ ၁၉၉၆၊ ၂၀၀၀၊ ၂၀၀၄၊ ၂၀၀၇၊ ၂၀၁၁၊ ၂၀၁၅)
ဂျပန် 04 !Second Round Group E winners 04 !၂၄ မတ် ၂၀၁၆ 08 !၈ (၁၉၈၈၊ ၁၉၉၂၊ ၁၉၉၆၊ ၂၀၀၀၊ ၂၀၀၄၊ ၂၀၀၇၊ ၂၀၁၁၊ ၂၀၁၅)
ထိုင်း 05 !Second Round Group F winners 05 !၂၄ မတ် ၂၀၁၆ 06 !၆ (၁၉၇၂၊ ၁၉၉၂၊ ၁၉၉၆၊ ၂၀၀၀၊ ၂၀၀၄၊ ၂၀၀၇)
ဆော်ဒီအာရေဗျ 06 !Second Round Group A winners 06 !၂၄ မတ် ၂၀၁၆ 09 !၉ (၁၉၈၄၊ ၁၉၈၈၊ ၁၉၉၂၊ ၁၉၉၆၊ ၂၀၀၀၊ ၂၀၀၄၊ ၂၀၀၇၊ ၂၀၁၁၊ ၂၀၁၅)
ဩစတြေးလျ 07 !Second Round Group B winners 07 !၂၉ မတ် ၂၀၁၆ 03 !၃ (၂၀၀၇၊ ၂၀၁၁၊ ၂၀၁၅)
ဥဇဘက်ကစ္စတန် 07 !Second Round Group H winners 08 !၂၉ မတ် ၂၀၁၆ 06 !၆ (၁၉၉၆၊ ၂၀၀၀၊ ၂၀၀၄၊ ၂၀၀၇၊ ၂၀၁၁၊ ၂၀၁၅)
အီရန် 07 !Second Round Group D winners 11 !၂၉ မတ် ၂၀၁၆ 13 !၁၃ (၁၉၆၈၊ ၁၉၇၂၊ ၁၉၇၆၊ ၁၉၈၀၊ ၁၉၈၄၊ ၁၉၈၈၊ ၁၉၉၂၊ ၁၉၉၆၊ ၂၀၀၀၊ ၂၀၀၄၊ ၂၀၀၇၊ ၂၀၁၁၊ ၂၀၁၅)
ဆီးရီးယား 07 !Second Round Group E runners-up 09 !၂၉ မတ် ၂၀၁၆ 05 !၅ (၁၉၈၀၊ ၁၉၈၄၊ ၁၉၈၈၊ ၁၉၉၆၊ ၂၀၁၁)
အီရတ် 07 !Second Round Group F runners-up 10 !၂၉ မတ် ၂၀၁၆ 08 !၈ (၁၉၇၂၊ ၁၉၇၆၊ ၂၀၀၀၊ ၂၀၀၄၊ ၂၀၀၇၊ ၂၀၁၁၊ ၂၀၁၅)
China PR 07 !Second Round Group C runners-up 12 !၂၉ မတ် ၂၀၁၆ 11 !၁၁ (၁၉၇၆၊ ၁၉၈၀၊ ၁၉၈၄၊ ၁၉၈၈၊ ၁၉၉၂၊ ၁၉၉၆၊ ၂၀၀၀၊ ၂၀၀၄၊ ၂၀၀၇၊ ၂၀၁၁၊ ၂၀၁၅)
၁ စာလုံးအမည်း ဖြင့်ရေးသားထားသော နိုင်ငံသည် ၎င်းနှစ်အတွက် ချန်ပီယံ ဖြစ်သည်။ စာလုံးအစောင်းဖြင့် ရေးသားထားသော နိုင်ငံသည် ၎င်းနှစ်အတွက် အိမ်ရှင်နိုင်ငံဖြစ်သည်
As of ၁၃ ဇွန် ၂၀၁၇မှတ်ချက်။ စာလုံးအမည်း ဖြင့်ရေးသားထားသော ကစားသမားများသည် ယှဉ်ပြိုင်နေဆဲ ကစားသမားများ ဖြစ်သည်။
ကိုယ့်ဂိုး ကိုယ်သွင်းခြင်း ၁ ဂိုး
ဇော်မင်းထွန်း (playing against Kuwait)
↑ ExCo approves expanded AFC Asian Cup finals။ AFC (16 April 2014)။ 25 August 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ AFC Asian Cup 2019 Competition Regulations။ AFC။
↑ World Cup draw looms large in Asia။ FIFA.com (13 April 2015)။ “Completing the tournament's qualifying contenders will be the next 16 highest ranked teams, with the remaining 12 sides battling it out in play-off matches to claim the last eight spots.”
↑ AFC Competitions Committee meeting။ Asian Football Confederation (28 November 2014)။ 30 November 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ FIFA Men's Ranking – January 2015 (AFC)။ FIFA.com (8 January 2015)။
↑ AFC Calendar of Competitions 2015 (PDF)။ AFC။
↑ AFC Calendar of Competitions 2016 (PDF)။ AFC။
↑ AFC Calendar of Competitions 2017 (PDF)။ AFC။
↑ AFC Competitions Calendar 2018။ AFC (12 April 2016)။
↑ India v Nepal headlines 2018 World Cup, 2019 Asian Cup qualifiers draw။ AFC (23 February 2015)။
↑ Draw date set for Round2of 2018 World Cup, 2019 Asian Cup qualifiers။ AFC (5 March 2015)။
↑ Draw: Russia 2018 / UAE 2019 Joint Qualification Round 2။ AFC (15 April 2015)။
↑ Regulations – 2018 FIFA World Cup Russia။ FIFA.com။
↑ Malaysia-Saudi match abandoned after crowd trouble။ The Star (8 September 2015)။ 8 September 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Malaysian FA sanctioned after abandonment of FIFA World Cup qualifier။ FIFA.com (5 October 2015)။5October 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ DISCIPLINARY OVERVIEW – 2018 FIFA WORLD CUP RUSSIA™ QUALIFIERS။ FIFA (1 February 2016)။5February 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ Current allocation of FIFA World Cup™ confederation slots maintained။ FIFA.com (30 May 2015)။
↑ Impact of Football Association of Indonesia suspension။ AFC (3 June 2015)။
↑ Yemen sanctioned for fielding ineligible player။ FIFA (6 July 2015)။
↑ ၂၀.၀ ၂၀.၁ Criteria to Determine the Rankings of Best-placed Teams among the Groups။ AFC။
↑ Stage set for UAE 2019 Qualifiers Play-off draw | AFC။ 2016-04-05 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ UAE 2019 Qualifiers Play-off draw concluded။ AFC (7 April 2016)။
↑ Teams for final round of AFC Asian Cup UAE 2019 qualifiers confirmed။ Asian Football Confederation။ 13 January 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Draw for final round of AFC Asian Cup UAE 2019 qualifiers concluded။ AFC (23 January 2017)။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=၂၀၁၉_AFC_အာရှဖလား_ခြေစစ်ပွဲ&oldid=416222" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၈ ဩဂုတ် ၂၀၁၈၊ ၁၇:၃၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။